Ndi Comments Kwesịrị verstụgharị? | Martech Zone
Ndi Comments Kwesịrị verstụgharị?
Tuesday, October 14, 2008 Tọzdee, Ọktoba 3, 2019 Douglas Karr
Emere m ụfọdụ nyocha nke blọgụ m na ngwụcha izu a iji chọọ mmekọrịta dị n'etiti nsonaazụ ọchụchọ m, ihe kacha ewu ewu na ntanetị, ihe ndị kachasị ewu ewu, na posts nke rụpụtara ego n'ihi ịjụ ma ọ bụ ikwu okwu.
N'iji nyochaa akwụkwọ m kachasị ewu ewu, ị ga-ahụ WordPress Kpọtụrụ Mpempe, Huntington Bank Sucks, M hapụrụ Basecamp, na ogologo nke Adreesị Email na-ebu ọtụtụ okporo ụzọ. Ihe ndị ahụ na-ebute ụzọ maka Nchọpụta Nchọgharị Nchọgharị. Ihe ndị ahụ na-ebukarị nkọwa. Agbanyeghị, posts ndị ahụ nyere m naanị dollar (na iko kọfị ole na ole) n'akpa m.
IMHO, iji ihe dị ka nanị ihe ịga nke ọma na-adịkarị, ma na-eduga na imirikiti blọọgụ ụlọ ọrụ na-ada ada.
Ihe dị ka 1 n'ime ndị ọbịa 200 ọ bụla na-abịa na blọọgụ m ma hapụ m okwu. Obere pasent nke ndị ahụ dị oke egwu, ihe ka n'ọnụ ọgụgụ bụ ndị m nwere mmekọrịta onwe m na… na ole na ole, ọ bụrụ na ọ bụla, m na-azụ ahịa. N'ezie, otu n'ime nkwekọrịta m kachasị ukwuu n'afọ a gara aga sitere na post nke gosipụtara nkà m na teknụzụ akọwapụtara (ma bụrụ nke ọma), mana enweghị azịza ọ bụla.
Mgbanwe Ọkwọ ụgbọala
Nsogbu a abụghị ịde blọgụ. Enweela m ọtụtụ ọgụgụ na blọọgụ m - mana enweghi m ike ịga n'ihu na-ede ọdịnaya na isiokwu ndị na-eme ka m gbanwee. As well, Enweghị m oku ime ihe na m sidebar.
Ejiri m ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha RSS na njikọ aka m tụọ ihe ịga nke ọma m (site na nkwupụta na blọọgụ m). Ana m echegharị atụmatụ ahụ! Ọ bụrụ na m chọrọ ịchụpụ ego wee jiri nke a dị ka azụmaahịa azụmaahịa, achọrọ m ịdabere ọdịnaya m iji merie na ọchụchọ na usoro dị mkpa maka ihe na-akpata ego. Achọrọ m ịnye a ụzọ na saịtị m iji jide ma tụọ mgbanwe ndị ahụ.
Ekwetaghị m na nkwupụta nha nha nha, ha ekwesịghịkwa ịbụ mmụba nke ọganiihu gị.
Ọ gwụla ma ịnwere ike ịhazi ọrụ a na nsonaazụ azụmaahịa, ọ bụ naanị ihe efu efu. Nke ahụ apụtaghị na achọghị m ịkọ ihe… ọ bụ naanị na agaghị m etinye ihe ọ bụla dị ka ngosipụta nke blọgụ m na-eme nke ọma.
Tags: mgbasa ozi mmekọrịtaarụmọrụMichael Stelznerugwo ugwoihu peejiwepu ahawikiality
Ndị ọkachamara na-elekọta mmadụ na azụ na azụ gị!
Ọkt 14, 2008 na 2:25 PM
Achọrọ m ịbụ onye mbụ na-ekwu maka okwu adịghị mkpa ịza. Akwa post!
Ọkt 14, 2008 na 4:40 PM
Ekwenyere m na ihe ndị a abụghị naanị ihe ịga nke ọma.
Enwere ohere buru ibu iji zụlite akara site na ịde blọgụ. Anyị bụ ndị a haziri na-ewu ụlọ ọrụ na-ọkachamara na chọọchị dị iche iche. Anyị na-amata ọdịiche site na ịmatakwu ihe ọmụma na nghọta banyere ndị ahịa ụka karịa ka ha nwere. Blog anyị na-enye anyị ohere igosipụta ihe ọmụma ahụ ma soro ndị otu ndị isi ụka na-akparịta ụka na-atụ anya ịkwado ha nke ọma maka ozi. Blọọgụ anyị na-arụ ọrụ dị ka otu akụkụ nke atụmatụ anyị iji mee nke ọma.
Oge ga-ekpughe uru zuru ezu.